Iindaba -Uyikhetha njani i-elbow brace kwaye yintoni umsebenzi kunye neempawu zokulungisa ingqiniba?
Kuqala, masithethe malunga nokuba yintoni into eblastical brace
Izihlangu zezilima ezidityaniswe ngentsinjana / ngeplangana (brace) luhlobo lwesibiyeli esibekwe ngaphandle komzimba ukuthintela intshukumo ethile yomzimba, ngaloo ndlela kuncediswa isiphumo sonyango lotyando, okanye lusetyenziselwa ngokuthe ngqo ulungiso lwangaphandle lonyango olungatyandi. Kwangelo xesha, ukongeza amanqaku oxinzelelo kwisiseko sokulungiswa kwangaphandle kunokuba yinto yokubopha ngamathambo kunyango lokulungisa ukukhubazeka komzimba.
Ab Qinisa amalungu
Umzekelo, idolo le-flail emva kwepoliyo, izihlunu ezilawula ukongezwa kunye nokuhamba kwamadolo ngokudibeneyo konke kukhubazekile, idolo elihlangeneyo lithambile kwaye alizinzi, kwaye ulwandiso olugqithisileyo luthintela ukuma. I-brace ingasetyenziselwa ukulawula ukudibanisa kwamadolo kwindawo eqhelekileyo yokuma ukuze kube lula ukuthwala ubunzima. Kwizigulana ezineparaplegia yamalungu asezantsi, idolo alinakuzinziswa kwindawo ethe nkqo xa umile, kwaye kulula ukugoba phambili kwaye uguqe ngamadolo. Ukusetyenziswa kwe-brace kunokuthintela ukudibana kwedolo ekuguqukeni. Omnye umzekelo kukuba xa izihlunu zamaqatha zikhubazeke ngokupheleleyo, i-ankle ithambile kwaye ineflegi. Unganxiba izihlangu zezilima ezidityaniswe ngentsinjana / ngeplangana ezidityaniswe kwisihlangu ukuzinzisa iqatha kunye nokwenza lula ukuma nokuhamba.
Khusela ukufakelwa kwamathambo okanye ukwaphuka endaweni yokuthwala ubunzima
Umzekelo, emva kwethambo lobufazi okanye i-tibial shaft inecandelo elikhulu lesiphene sethambo lokumilisela simahla, ukuze kuqinisekiswe ukusinda ngokupheleleyo kokudityaniswa kwamathambo kunye nokuthintela ukuqhekeka kwethambo ekubeni kwenzeke ngaphambi kokuba umthwalo ulayishwe, umlenze ongezantsi I-brace ingasetyenziselwa ukuyikhusela. Le brace inokuthwala ubunzima emhlabeni. Umxhuzulane ugqithiselwa kwisifo se-ischial tuberosity nge-brace, ngaloo ndlela unciphisa ubunzima be-femur okanye i-tibia. Omnye umzekelo kukulimala kweqatha. Ngaphambi kokuba ulwaphulo luphiliswe ngokupheleleyo, lunokukhuselwa nge-brace.
Lungisa ukukhubazeka okanye ukuthintele ukunyuka kwayo
Umzekelo, abaguli abane-scoliosis ethambileyo engaphantsi kwe-40 ° banokunxiba ivesti yokuqinisa izihlangu zezilima ezidityaniswe ngentsinjana / ngeplangana ukulungisa i-scoliosis kunye nokuthintela ukonyuka kwayo. Ukuqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhawulwashu. Ukuhla kweenyawo, ungasebenzisa isibiyeli esidityaniswe nesihlangu ukunqanda ukuhla kweenyawo njalo njalo. Ukuze unciphise intloko kunye neenyawo ezicabaleleyo, ukongeza ii-insoles ikwaluhlobo lwesibiyeli.
Umzekelo, xa izihlunu zesandla zikhubazekile kwaye zingakwazi ukubamba izinto, sebenzisa izihlangu zezilima ezidityaniswe ngentsinjana / ngeplangana ukubamba isihlahla kwindawo esebenzayo (indawo yokuphambuka), kunye nokufaka amandla ombane kwingalo yezihlangu zezilima ezidityaniswe ngentsinjana / ngeplangana ukukhuthaza ukuncipha kwemisipha ye-flexor kunye buyisela amanqaku okubambelela. Ezinye iibrace zilula kulwakhiwo. Umzekelo, xa kukho umnwe ongekhoyo, igwegwe okanye ikliphu emiswe kwisilungisi sokubamba ngengalo ingasetyenziselwa ukubamba icephe okanye imela.
Umsebenzi wokuzilolonga ngomsebenzi wesandla
Olu hlobo lwe-brace luqhele ukusetyenziswa. Umzekelo, ukuziqhelanisa nokuhamba kwamalungu e-metacarpophalangeal kunye namalungu adibeneyo e-interphalangeal, i-brace ebambe isihlanganisi sesandla kwindawo yokwandiswa komqolo, kunye ne-brace e-elastic egcina ukujika kweminwe ukwenza ulungelelwano lweminwe.
Up Yenza ubude
Umzekelo, xa isigulana esinelungu elifutshane elifutshane simi kwaye sihamba, i-pelvis kufuneka ithambeke, kwaye ukuthambeka kwe-pelvis kuya kubangela ukugoba okuhlawulelweyo kwe-lumbar spine, enokubangela iintlungu ezisezantsi emva kwexesha. Ukulungiselela ubude bamalungu amafutshane, iinyawo zonyuka. .
Ukulungiswa kwangaphandle kwethutyana
Umzekelo, umjikelo wentamo kufuneka unxitywe emva kotyando lokudityaniswa komlomo wesibeleko, isangqa esinqeni okanye ivesti kufuneka inxitywe emva kotyando lwe-lumbar fusion.
Ngokwandiswa kwamayeza okubuyisela kwimeko yesiqhelo kunye nokuqhubeka okuqhubekayo kwamaqondo obushushu asezantsi kunye namaqondo obushushu aphezulu e-thermoplastic kunye nezinto ze-resin, izihlangu ezahlukeneyo ezisebenzisa iithiyori zoyilo ze-biomechanical zihlala ziphuhliswa. Ngezibonelelo zabo zokusebenza okulula kunye neplastikhi eyomeleleyo, banokubuyisela i-gypsum kwaye basetyenziswe ngokubanzi kunyango. . Ngokwamacandelo ahlukeneyo okusetyenziswa, ii-brace zingahlulwa zibe ziindidi ezisibhozo: umqolo, igxalaba, ingqiniba, isihlahla, inyonga, idolo kunye neqatha. Phakathi kwazo, amadolo, igxalaba, ingqiniba, kunye nokuqina kweqatha zezona zisetyenziswa kakhulu. Iibhanti zangoku zokubuyisela kwimeko yesiqhelo zinokuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno ezahlukileyo zokupheliswa kwangaphambi kokusebenza, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukulawulwa kokuphuma ngokudibeneyo kunye nokufumana kwakhona. Izinto eziqhelekileyo ezisetyenziswa egxalabeni zibandakanya: ukudityaniswa kwamagxa ngokudibanisa kunye nokuqiniswa kwamagxa; I-elbow brace yahlulwe yangamacangci eengqiniba, i-static elbow brace kunye ne-elbow brace. Ukuqiniswa kweqatha kusekwe kwindima yabo eyahlulwe yasebenza, indawo yokuhamba yesiqhelo kunye nokukhuselwa ngokudibeneyo kwamaqatha. Ukusukela kwangoko emva kokuqhaqha emva kokusebenza, ukubuyisela ukusebenza ngokudibeneyo, ukulawula inversion ye-ankle kunye ne-valgus ngexesha lokuzilolonga, inokudlala indima elungileyo kunyango nasekuvuseleleni.
Xa sikhetha ulungelelwaniso olungqinelanayo oludibeneyo, kufuneka sikhethe ngokwemeko yethu. Zama ukukhetha enye enobude obuguquguqukayo kunye ne-chuck, eluncedo ngakumbi kuqeqesho lwethu lokuvuselela imeko.